Uchungechunge lwe-360SL Swinging Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
I-Series 360SL Swinging Dragon® dredge iyi-swinging ladder dredge eyenzelwe ukusebenza eziteshini ezincane namaphrojekthi amancane. Le dredge eguquguqukayo ilungele amaphrojekthi wokubuyisela ahlanganisa ama-marinas, amachibi, namaphrojekthi wokudonswa kwemvelo obucayi.
I-360SL DREDGE ADVANTAGES
Injini kadizili eyodwa inika amandla i-hydro-static pump drive ezimele kanye nepompo lesibili lokulawula okusizayo.
Ifakwe izilawuli ezilinganayo ze-elektroniki zemisebenzi enembile kakhulu yokwehlisa nokwenziwa lula kwe-opharetha.
I-single kicker spud yokubeka ngokushesha nokuqhubekisela phambili i-dredge ngaphandle kwamahange nezintambo.
Iphampu yokudonswa kwe-dredge efinyeleleka kakhulu yokugcinwa kwesikhashana nokulungiswa kwepompo, njengoba kudingeka.
Usayizi wokukhipha: I-8 ″ x 8 ″ (200 mm x 200 mm)
Injini enkulu uJohn Deere 9.0L Injini Yasolwandle 6090AFM85: 375 HP (280 kW)
Amandla @ Isinqe seDrayivu: 40 HP (30 kW)
Ubuningi Bokudonswa Okukhulu: 15 '(4.5 m)
Isivikelo somoya Wiper & Uphondo
Uhlelo Lokumiswa KweDredge
Ukudonsa / Ukukhipha I-Valve Relief Valve